PrestaShop inodarika makumi mana emazana ezvitoro zvepamhepo muSpain uye yakasimbiswa seinjini yeCommerce | ECommerce nhau
PrestaShop inodarika makumi mana emazana ezvitoro zvepamhepo muSpain uye yakasimbiswa seinjini yeCommerce
Eva maria Rodriguez | | Zvechokwadi uye nhau, CMS uye Technology
Chikamu che eCommerce inofambira mberi nekukurumidza muSpain. Zvinotarisirwa kuti mugore rino ra2015, kutengesa kweSpanish online zvitoro vakarova rekodhi nyowani, vanodarika 15.000 miriyoni euros mukutora uye tarisiro yegore ra2016 iri nani.
Izvi zvinoratidzwa ne data rakaunganidzwa mu infographics yakagadzirwa na Prestashop, yakanyanya kushandiswa yakavhurwa sosi eCommerce mhinduro muSpain. Zvitoro zvinopfuura makumi mana zvepamhepo zvinotoshandisa Prestashop munyika ino.
1 Kutengesa kwepamhepo muSpain kwakasimbiswa
2 Zvinopfuura zviuru makumi mana zvezvitoro zvePrestaShop muSpain
3 Mahara akagadzirirwa kudzidziswa webminars
Kutengesa kwepamhepo muSpain kwakasimbiswa
Sekureva kweshumo yazvino kubva kuNational Markets uye Competition Commission, kutengesa kwepamhepo muSpain kwakazara mamirioni e11.575 mamirioni mumatatu ekutanga e2015. Kana iwo maitiro akafanana achienderera mukota yechina, gore rino Spanish eCommerce ichakunda chipingamupinyi chemamirioni gumi nemashanu emamiriyoni, rekodhi nyowani mushure memamirioni emamirioni e14.610 muna2014. Muna 2016, zvitoro zveSpanish zvepamhepo zvichave nekutendeuka kwemamiriyoni makumi maviri nemazana manomwe nemakumi manomwe emamiriyoni, zvichimiririra kuwedzera kwe24.700%, maererano nezvakafungidzirwa neBoston Consulting Group.
Pakupera kwa2015, 67% yevaSpanish vanenge vatenga paInternet kamwe chete muhupenyu hwavo, sekureva kweInteractive Advertising Bureau (IAB). Iyo avhareji epamhepo kushandisa muSpain inomira pa658 euros pagore, ichiri kure ne1.117 euros muFrance, 1.350 euros kuGerman kana 1.549 euros muUnited Kingdom maererano neRetailMeNot data. Kunyangwe izvi, Spanish eCommerce ichave yakura ne18% muna2015 maererano neIAB, mwero wakakwira kupfuura uyo weimwe inotungamira misika yeEurope seFrance (17%) kana England (16,2%).
Chidzidzo chimwe chete ichi chinoratidza kuti maSpanish anotenga paInternet zvakanyanya kuchengetedza (86%), kunyaradza (78%), kuvimba kana kukurudzira (68%), kana nekuti izvo zvavari kutsvaga zvinongowanikwa online (63%)
Zvinopfuura zviuru makumi mana zvezvitoro zvePrestaShop muSpain
MuSpain patova nezvitoro zvinodarika makumi mana zvepamhepo zvinoenderana nePrestaShop, data rinoisimbisa seye inonyanya kushandiswa open source e-commerce mhinduro munyika ino.
Shanduko yaro yakave inoshamisa. PrestaShop yakasvika kuSpain mu2012 uye mugore rekutanga yakatosvika zviuru gumi online zvitoro. Pakupera kwa10.000 yaive iriko mune dzinopfuura zviuru makumi maviri eCommerce uye mugore rapfuura yakawedzera kuita kwayo kusvika muzvitoro makumi mana.
Madrid inotungamira chinzvimbo chenyika chePrestaShop zvitoro muSpain ine huwandu hwe5.986 5.610 zvitoro zvemagetsi zvinoshandisa mhinduro iyi mudunhu. Inoteverwa zvakanyanya neBarcelona, ​​ine zvitoro 2.765 uye chinhambwe iValencia (1.977), Alicante (1.656) uye Seville (XNUMX).
Bertrand Amaraggi, Nyika Manager weSpain, anotsanangura zvikonzero zvekubudirira kwePrestaShop muSpain: "Spain ndiyo imwe yemisika ine fungidziro huru muEurope kubva padigital maonero. Ndokusaka zvitoro zvakawanda uye zvakawanda zvichikurudzirwa kutanga kutengesa paInternet. Mune dambudziko iri, PrestaShop software inoita basa rakakosha nekupa chero bhizinesi mukana wekugadzira nekutarisira chitoro chepamhepo pasina muripo ”.
Gore rino kambani yakaratidza zvakare PrestaShop Cloud, iro gore vhezheni yeayo anozivikanwa e-commerce software iyo inokutendera iwe kuti ugadzire online zvitoro zvakachengetwa pane PrestaShop's pachake maseva. Nekuda kweichi chitsva, makambani madiki nepakati-epakati eSpanish achakwanisa kutanga eCommerce yavo nenzira iri nyore uye nekukurumidza.
PrestaShop yakavambwa mu2007 nebasa rekupa pasi yakasununguka uye yemhando eCommerce mhinduro inotsigirwa nezvakanakira yemahara software. Mhinduro dzayo dzinowanikwa munyika mazana maviri nemitauro makumi matanhatu nemashanu, uye dzinoshandiswa nezvitoro zvinodarika mazana maviri nemakumi mashanu pasi rese.
Mahara akagadzirirwa kudzidziswa webminars
Nechinangwa chekuenderera mberi nekukurudzira zvitoro kuvhura kune nyika yeecommerce commerce, kudzidza zvakawanda nezve Online Kushambadzira uye kuwedzera kwavo kutengesa kweKisimusi, PrestaShop iri kuenda kuronga nhevedzano ye mahara webinars inotungamirwa neyakanakisa nyanzvi muchikamu.
Iwo mawebhu webhu anotarisana nemaitiro ekushandisa nzira inobatsira eCommerce zano, maitiro ekugadzira yemahara online chitoro nePrestaShop, maitiro ekuvandudza peji rekubhadhara kana SEO pakati pemamwe misoro.
Aya madandemutande achaitika muna Mbudzi 23, 24 na25. Iwe unogona kuziva nezvavo uye kunyoresa pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » PrestaShop inodarika makumi mana emazana ezvitoro zvepamhepo muSpain uye yakasimbiswa seinjini yeCommerce
Chete hafu yemakambani eSpain ane komiti yavo yepamusoro inobatanidzwa mukuverenga
Iko kukanganisa kwekudzivisa paunenge uchigadzira eCommerce